Inona no atao amin'ny bisikileta sy ny fomba hanampiany ny natiora | Bezzia
Inona no atao hoe bisikileta
Miteraka fako bebe kokoa hatrany izahay ary noho izany dia sarotra be ny amin'ny tontolo iainana tsy ho voan'izany. Tsapanay fa ny fanjifana mpanjifa lehibe dia mitarika antsika hamokatra fako taonina isan-taona. Noho izany, ny fanodinana entana dia nanjary teboka iray lehibe hampihenana ny fiakaran'ny fako. ny upcycling dia fironana mety indrindra mifantoka amin'ny fanodinana ary hanatsara ny efa ananao.
El upcycling dia fantatra koa amin'ny hoe upcycling. Ity teny ity dia milaza amintsika fa ny famerenana fanodinana dia ampiasaina amin'ny famoronana mba hamoronana zavatra manan-danja, sarobidy kokoa noho izay nananantsika teo aloha, ka nanampy io teny io. Raha tsy misy fisalasalana dia hevitra lehibe ny manome lanja bebe kokoa amin'ny hevitra momba ny fanodinana ary maro no mahita fa zavatra ahazoana tombony ihany koa izany.
1 Avy aiza ny fanatanjahan-tena?
2 Fanatanjahan-tena amin'ny lamaody
3 Paikady amin'ny haikanto na haingon-trano
Avy aiza ny fanatanjahan-tena?
Upcycling dia teny iray tsy vaovao, satria niseho tamin'ny taona sivifolo. Fa raha tsy tamin'ny taonjato vaovao vao nanjary manan-danja io teny io. Tamin'ny taona sivifolo dia toa tsy dia zava-dehibe loatra ny fiantraikan'ny tontolo iainana kanefa ankehitriny dia fantatsika bebe kokoa ireo olana ateraky ny fividianana mpanjifa sy ny fari-piainana entintsika mamorona voajanahary amin'ny fotoana fohy sy maharitra. Izay no mahatonga ny hevitra maro izay ampiana amin'ny fomba fiaina vaovao toy ny fanaovana bisikileta, izay ny fampiasana ny fitaovana efa ananantsika hamoronana zava-baovao sy sarobidy, zavatra mamorona azo ampiasaina indray. Teny iray izay manandanja tokoa eo amin'ny tontolon'ny lamaody sy ny kanto.
Fanatanjahan-tena amin'ny lamaody
Betsaka ny orinasa efa nanatevin-daharana an'ity hevitra vaovao ity maharitra. Mora ny mahita marika any amin'ny orinasa maro izay milaza amintsika fa ny akanjon'izy ireo dia noforonina avy amin'ny lamba ampiasaina indray na koa avy amin'ny fitaovana hafa toy ny vera na plastika. Izany dia mahatonga antsika hahita fa tsy mividy lamaody fotsiny isika, fa kosa mividy akanjo avy amin'ny fitaovana efa nampiasaina indray mba hamoronana zava-baovao izay manan-danja ihany koa, ary mahatonga azy ireo ho ilaina indray. Ny hevitra amin'ny lamaody dia niditra an-tsokosoko ary misy ny orinasam-barotra toy ny H&M na Zara izay mampiditra an'io karazana akanjo io. Jereo ireo famantarana ary ho hitanao fa maro no namboarina tamin'ny fitaovana ampiasaina indray, mba hahafantaranao fa mikarakara ny tontolo iainana ianao amin'ny fotoana itiavanao ny lamaody vaovao.
Paikady amin'ny haikanto na haingon-trano
Sehatra iray hafa ahitantsika ity voambolana ity dia ny zavakanto. Ny tontolon'ny zavakanto dia nampiasa ny vatan'ny famoronana mba hamoronana zavatra vaovao miaraka amin'ny fitaovana efa ela. Amin'izao fotoana izao dia misy ny anarana hiantsoana an'io ary mihamaro ny mpanakanto manapa-kevitra ny hanome fiainana vaovao ho an'ny sombin-javatra sy fitaovana izay harian'ny olon-kafa. Fomba iray hafa hampiasana ireo fitaovana ireo amin'ny tanjona tsara, hanakanana azy ireo tsy handoto bebe kokoa.
Raha ny momba ny haingon-trano, dia afaka mahita hevitra vitsivitsy momba an'io teny io koa ianao. Misy jiro vita amin'ny kristaly na metaly namboarina ary koa lambaAraka ny hita amin'ny lamaody, ny lamba dia azo averina simba amin'ny lamba tonta taloha izay nariana. Amin'izany fomba izany no hananantsika trano izay hanatrehana ny fanodinana amin'ny lafiny maro. Na ny mankafy ny kanto na ny haingon-trano sy ny lamaody aza dia afaka manampy ny tontolo iainana miaraka amin'izay isika ary io karazana fahatsiarovan-tena io no ilaina ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » Inona no atao hoe bisikileta
Zavatra tokony hatao aorian'ny fiofanana
Ny lakile rehetra amin'ny loko vita amin'ny tsaoka